သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မွေးနေ့
ချယ်ရီပွင့်တွေ မြေပြင်ပေါ်မှာ ပန်းရောင်သန်းနေတဲ့နေ့ …
နွေဦးရာသီမို့ ပရစ်ဖူးတွေထွက်စ သစ်ပင်ကြီးငယ်တွေပေါ်မှာ
Coyote တွေ ခြုံကြားထဲက တိုးထွက်လာတယ်။
မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာ Canadian geese တွေ …..
ရေကန်စပ် ကျောက်တုံးတွေပေါ်မှာ လိပ်ကလေးတွေ….
ကောက်ရိုးမျှင်တွေကြားမှာ အရောင်ရင့်ရင့် Beaver လေးတွေ…
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလှကို ခံစားဖို့
မြင့်မြတ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့
လတစ်လရဲ့ ၂၂ ရက်နေ့မှာ…
လေပြေဟာ ကမ္ဘာရဲ့ သည်ဘက်ခြမ်းမှာ ကျွတ်ဆတ်အေးခဲနေတယ်
ကမ္ဘာရဲ့ ဟိုးဘက်ခြမ်းမှာတော့ ပူနွေးစွတ်စိုနေတယ်။
ပူနွေးဆဲ လေတွေကို သယ်ဆောင်ထားကြတယ်။
ကြမ်းရှရှ မီးခိုးနံ့တွေ သင်းပျံ့တဲ့ လေ တွေလား
အဆိပ်ငွေ့တွေ ပြည့်နေတဲ့ လေ တွေလား
ဆီကြော်နံ့တွေ ဝေ့၀ဲနေတဲ့ လေ တွေလား
သယ်ဆောင်ထားတဲ့ အဆုတ်တွေသာ သိလိမ့်မှာမို့
တိတ်တဆိတ်ခေါင်းငုံ့လို့ .... လတ်ဆတ်တဲ့လေပြေကို တောင့်တ
ခပ်ဝေးဝေးက လူတွေ ခြေမချဖူးတဲ့ ကမ်းစပ်လေးတစ်ခုကတော့ ကြည်လင်စွာပြုံးနေတယ်…
ဘယ်သူမှ ဖြတ်မလျှောက်ဖူးတဲ့ တောအုပ်လေးတစ်အုပ်က လွတ်လပ်စွာ စိမ်းစိုနေတယ်…
ကွန်ကရစ်မိုးမျှော်တိုက်တွေနဲ့ ဝေးတဲ့ မြေကွက်လပ်တွေမှာတော့...
အီကိုစနစ်ထဲက မမြင်နိုင်တဲ့ သေးငယ်တဲ့အကောင်လေးတွေ ကလေးတသိုက်နဲ့ အိမ်ရာထူထောင်နေတယ်…
ကမ္ဘာကြီးကတော့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ….
ကြားဖူးနားဝ လူနီခါရီးလူမျိုးစုတစ်စုရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခပ်တိုးတိုးညည်းနေတယ်…
နောက်ဆုံးကျန်ရစ်တဲ့ မြစ်တစ်စင်း အဆိပ်ခတ်ခံရတဲ့နေ့
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တစ်ကောင်တည်းသောငါး ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နေ့မှာ
ငွေချပ်တွေဟာ စားလို့ရတဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ကြောင်း …
လူသားတွေ နောက်ကျလွန်းစွာ သိသွားကြလိမ့်မယ်…”
ပုံကို ဂူဂဲလ်မှ ရရှိပါသည်။
Comment by Phyo Evergreen — April 22, 2009 @ 9:04 pm
မလေးရေ. အလည်ရောက်ပါတယ်နော်။ အဓိပ္ပါယ် နက်နဲ့တဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ဘယ်လိုပြောရမှန်တောင်မသိပါဘူ။ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရောင်ပြန့် ကဗျာလေးတွေကိုလည်း အချိန်ပေးပြီး လာရောက်ခံစားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Comment by မေတ္တာရောင်ပြတ် — April 22, 2009 @ 9:40 pm
မြေကမ္ဘာနေ့မှာပေးတဲ့ .သင်ခန်းစာတစ်ခုလေလား ?????
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာပျော်သည့် ကျား — April 22, 2009 @ 11:52 pm
သိသလိုလိုဖြစ်နေတာတော့ကြာပြီး သိပေမယ့် မသိဟန်ဆောင်ရတဲ့ အရာတွေထဲ ငွေချပ်တွေက ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။
Comment by မောင်မျိုး — April 23, 2009 @ 12:46 am
ခုချိန်မှာတော့ ငွေချပ်တွေဟာ စားလို့မရတဲ့ အရာဆိုတာသိပေမဲ့ အဲဒီငွေချပ်ကိုရဖို့ ပင်ပန်းစွာရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ မလေးရေ။
Comment by ကြည် — April 23, 2009 @ 6:37 am
ဒီစကားလေးလက်ဆင့်ကမ်းတာ အ၇မ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မလေး
Comment by ပန်ဒိုရာ — April 23, 2009 @ 9:00 am
Actually, we should not leave it just like “let it be”. We should do some measure as soon as possible. As Al Gore said in “An Inconvenient Truth”, his son recover because of the immediate treatment, we should give the treatment to our precious world immediately. To do so, all the humankind have the duty to do. Duty to save our mother world. So, let start it from me and you.
Comment by am.re — April 24, 2009 @ 5:02 am
ဒီနေ့ ၂၆ ရက်နေ့(အတိအကျ april 2009)
လေတွေလုံးဝ မတိုက်လို့ ပူအိုက်နေတဲ့နေ့ 
Air-Con ပျက်နေ့ တဲ့နေ့ 
အိပ်လို့ မရတဲ့နေ့ 
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အ၀ါရောင် Cigarette အဆီခံတွေ ရှုပ်ပွနေတဲ့နေ့ ….တောက်…
ဒီနေ့ ကမ္ကာပေါ်က လူတချို့ ရဲ့မွေးနေ့ …ငါ့မွေးနေ့ တော့ ဟုတ်ဘူး။
ကမ္ကာကြီးပေါ်ကလူတွေ သေတဲ့သူသေ၊ လူတွေအိပ်တဲ့သူအိပ်၊ နိုးတဲ့သူနိုးနေတဲ့နေ့ 
ပုံမှန်နေ့ တစ်နေ့ ပါပဲ။ ဒီနေ့ ၂၆ april 2009.
နေ့ တစ်နေ့ ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပုံမတူတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ 
Comment by boyz — April 25, 2009 @ 4:03 pm
Phyo Evergreen .. ကိုဖြိုးရေ.. ဆီဗုံးဘယ်ရောက်သွားလဲမောင်လေး
မေတ္တာရောင်ပြတ် … တစ်ကယ်ကို မေတ္တာရောင်ပြတ် ပြီလားညီမရယ်.. :P
ဒေါင်းသေချောင်းမှာပျော်သည့် ကျား … ဘယ်သူ့ကိုမှ သင်ခန်းစာမပေးရပါဘူး :D ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်သတိပေးပြီး အမှတ်တယကဗျာဖွဲ့ဆိုထားတာ အဲဒီတနင်္ဂနွေကတောင် ကမ္ဘာကြီးနေ့ဈေးရောင်းပွဲ၊ သစ်ပင်ရောင်းပွဲရောက်သေးတယ်။ ဒီမြို့မှာတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆင်နွှဲပါတယ်။
မောင်မျိုး .. ခုချိန်မှာတော့ ငွေချပ်တွေ အရမ်းကိုဟောတ်နေတယ်မောင်လေးရေ
ကြည်.. မလေးလဲ တူတူပါပဲကြည်ရယ်..
ပန်ဒိုရာ… ဟုတ် မပန်..
am.re … ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်တွေကလာတဲ့ ကျမလို လူမျိုးတွေကတော့ သူ့အလိုလို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်တယ်လိမ့်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်..
boyz .. နေ့တစ်နေ့ကို ကဗျာတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ကဗျာစပ်သူတစ်ယောက်က သူ့ခံစားချက်နဲ့သူ ဖွဲ့နွဲ့တာကို စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းများရှိသေးလို့လားရှင်း) boyz ရဲ့ကဗျာအချို့က ပေါက်ကွဲမှုပြင်းထန်တယ်.. အထူးသဖြင့် “ချစ်ဇာတ်လမ်း” ဆိုတဲ့ကဗျာကို ခံစားသွားပါတယ်
Comment by မလေး — April 25, 2009 @ 6:47 pm
အစ်မရေ လည်လည်ရောက်တယ်…ကဗျာလေးခံစားသွားတယ်…နောက်ကျမှ သိမှာစိုးလို့သတိပေးထား သလိုပါပဲ…ကျေးဇူးပါချင်ဗျာ…။ အခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ခွင့်ရတာ တကယ်ကို ၀မ်းသာမိပါတယ်..။ အားပေးနေတယ် အမ..။
Comment by ဆည်းဆာသံစဉ် — April 26, 2009 @ 8:04 am
ဆီဘုံးလား.. အစ်မကိုအားကျလို့လေ…….. ;)
Comment by Phyo Evergreen — April 28, 2009 @ 7:50 am
ရင်ခုန်သံ တစ်ချက်ချင်းမှာ အိပ်မက်နေခဲ့ရတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့မွေးနေ့ (အရာအားလုံးရဲ့ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတွေ) ကိုတောင် မသိလိုက်ဘူး မလေးရေ…
Comment by အေးချမ်းသူ — May 8, 2009 @ 5:10 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:04 PM